Mgbawa COVID na Afrịka: Ijeri US $ 7.7 ụwa enweghị ike ịgọnarị
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ahụike » Mgbawa COVID na Afrịka: Ijeri US $ 7.7 ụwa enweghị ike ịgọnarị
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Akụkọ kacha ọhụrụ na South Africa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
WHO: 90% nke ọrụ ahụ ike mba na-aga n'ihu na-agbagha site na ọrịa COVID-19
Ụdị Delta na -etinye ụwa na nkwado ndụ. Ụwa nọ n'ihe ize ndụ, mana ọ nweghị mpaghara karịa Africa. WHO chọrọ ijeri $ 7.7 maka Afrịka ugbu a, ụwa enweghịkwa ike ileghara ya anya. Dị ka Onye isi ala US Biden kwuru: “Anyị niile nọkọ ọnụ. ọ nweghị onye nọ na nchekwa ruo mgbe mmadụ niile nọ na nchekwa. ”
Healthtù Ahụ Ike Worldwa kọrọ na Africa, ọnwụ ejirila 80% mụbaa naanị n'ime izu anọ gara aga. A na-akwalite ọtụtụ mmụba a site na Delta dị iche iche na-ebufe nke ukwuu, nke achọpụtarala ugbu a na opekata mpe mba 4.
WHO na -akwado mba dị iche iche na -enye ikuku oxygen, yana ntuziaka iji nyere mba aka ịchọpụta ụdị dị iche iche, anyị na -aga n'ihu na -arụ ọrụ kwa ụbọchị na netwọkụ ọkachamara nke ụwa iji ghọta ihe kpatara ụdị Delta ji agbasa ngwa ngwa.
Ebumnuche nke WHO ka ga -akwado mba ọ bụla ịgba ọgwụ mgbochi opekata mpe 10% nke ndị bi na ngwụcha Septemba, opekata mpe 40% na njedebe nke afọ a, yana 70% n'etiti afọ na -abịa. Ihe na -erughị 2% nke ọgwụ niile a na -eme n'ụwa niile bụ n'Afrịka. Naanị 1.5% nke ndị bi na kọntinent a na -agba ọgwụ mgbochi ọ bụla.
Taa, WHO ewerela nzọụkwụ ọzọ n'ihu, ya na akwụkwọ ozi ebumnobi nke na -akọwapụta usoro mmekorita nke ndị mmekọ nọ na oghere bịanyere aka na ya: WHO; ọdọ mmiri patent ọgwụ; Afrigen Biologics; Institute of Biologicals and Vaccines Institute of Southern Africa; Kọmitii Nnyocha Ahụike South Africa na Ụlọ Ọrụ Njikwa na Mgbochi Ọrịa Africa.
Na nzaghachi maka ịwa ahụ Delta, taa nnweta COVID-19 Ngwaọrụ ngwangwa na-ewepụta Rapid ACT-Accelerator Delta Response, ma ọ bụ RADAR, na-akpọ oku ngwa ngwa maka ijeri dollar 7.7 maka ule, ọgwụgwọ na ọgwụ mgbochi.
Na mgbakwunye, anyị ga -achọ ego ọzọ maka afọ a maka COVAX iji gosipụta nhọrọ ya maka ịzụrụ ọgwụ mgbochi maka 2022.
Onye isi oche nke Healthtù Ahụ Ike Worldwa na-ahụ maka Healthtù Ahụ Ike andwa wee họpụta ya, na-ahụ maka Mgbakọ Ahụ Ike Worldwa. Onye isi oche ugbu a bụ Tedros Adhanom, onye a họpụtara na 1 Julaị 2017
O kwuru na nnọkọ mkparịta ụka ụnyaahụ gbasara steeti COVID-19 na Afrịka.
Ụtụtụ ọma, ehihie ọma na mgbede ọma.
N'izu gara aga, enwere m nsọpụrụ ịga Bahrain na Kuwait, ebe WHO mepere ụlọ ọrụ obodo ọhụrụ abụọ anyị.
Enwekwara m ohere ileta ọtụtụ ụlọ ọrụ ahaziri maka ịzaghachi COVID-19 ma ụzọ ọhụrụ na nke zuru oke masịrị m.
Anyị nwere ọfịs obodo 152 gburugburu ụwa. Ha bụ isi ihe WHO na -eme - mba na -akwado iji wusie usoro ahụike ike ma melite ahụike nke ndị bi na ha.
Tupu nke ahụ, enwere m nsọpụrụ na a kpọrọ m òkù ịbịa Tokyo ịgwa Kọmitii Olympic Mba Nile okwu.
Agara m ịza ajụjụ a na -ajụkarị m: olee mgbe ọrịa ọjọọ ga -akwụsị?
Azịza m bụ na ọrịa ọjọọ ga -akwụsị mgbe ụwa kpebiri ịkwụsị ya. Ọ dị anyị n'aka.
Anyị nwere ngwaọrụ niile anyị chọrọ: anyị nwere ike igbochi ọrịa a, anyị nwere ike nwalee ya, anyị nwere ike ịgwọ ya.
Ma kemgbe ọgbakọ ọgbakọ mgbasa ozi ikpeazụ anyị, ikpe na ọnwụ sitere na COVID-19 na-arị elu.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ 4 kọọrọ WHO na izu gara aga, na usoro ndị dị ugbu a, anyị na -atụ anya na ọnụọgụ ikpe ga -agafe nde 200 n'ime izu abụọ na -abịa. Anyị makwa na nke ahụ bụ nleda anya.
Ná nkezi, n'ime mpaghara isii nke WHO, ọrịa butere site na 80%, ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ, n'ime izu anọ gara aga. N'Africa, ọnwụ ejirila 80% rịa n'otu oge ahụ.
Ihe dị ukwuu na mmụba a bụ ihe dị iche iche na -ebufe Delta, nke achọpụtala ugbu a na opekata mpe mba 132.
Ndi WHO adọla aka na ntị na nje COVID-19 na-agbanwe agbanwe kemgbe eburu ụzọ kọọ ya, ọ ka na-agbanwe. Ruo ugbu a, ụdị nchegbu anọ apụtala, a ga -enwekwa ihe ọzọ ma ọ bụrụ na nje ahụ na -aga n'ihu na -agbasa.
Ọkwa ịrị elu na -akwalitekwa site n'ịgwakọta na ijegharị mmekọrịta mmadụ na ibe ya, iji ekweghị ekwe na -ahụ maka ahụike ọha na usoro mmekọrịta mmadụ na ibe ya, yana iji ọgwụ mgbochi na -ezighi ezi.
Mmeri ndị siri ike nọ n'ihe ize ndụ nke ịbụ ndị furu efu, yana usoro ahụike n'ọtụtụ mba na-erikpu.
Ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ọrịa na-emepụta ụkọ ọgwụgwọ dịka oxygen na-azọpụta ndụ.
Mba iri abụọ na itoolu nwere mkpa ikuku oxygen dị elu ma na-arị elu, na ọtụtụ mba enweghị akụrụngwa zuru oke iji chebe ndị ọrụ ahụike n'ihu.
Ka ọ dị ugbu a, ọnụego nnwale na mba ndị obere ego na-erughị pasent 2 nke ihe ha nọ na mba ndị nwere nnukwu ego-na-ahapụ ụwa kpuru ìsì ịghọta ebe ọrịa a na otu ọ si agbanwe.
Na -enweghị ọnụego ule ka mma n'ụwa niile, anyị enweghị ike ịlụso ọrịa a ọgụ n'ihu ma ọ bụ belata ihe egwu dị iche iche dị ize ndụ na -apụta.
Mana anyị chọrọ karịa:
Anyị chọrọ onyunyo siri ike;
Anyị chọrọ nnwale usoro iji meziwanye nghọta zuru ụwa ọnụ ebe nje dị, ebe a na -achọkarị ihe gbasara ahụike ọha, yana ikewapụta ikpe ma belata mbufe;
Anyị chọrọ ndị ọrịa ka ha nweta nlekọta ụlọ ọgwụ n'oge site n'aka ndị ọrụ ahụike zụrụ azụ ma chekwaa, nwee oxygen ka ọ gwọọ ndị ọrịa siri ike ma zọpụta ndụ;
Anyị chọrọ ndị ọrụ ahụike a zụrụ nke ọma na ndị echekwara nke ọma na sistemụ iji nye ọrụ na ngwaọrụ ịchekwa ndụ;
Anyị chọrọ nyocha na mmepe ọzọ iji hụ na nnwale, ọgwụgwọ, ọgwụ mgbochi, na ngwaọrụ ndị ọzọ ka dị ire megide ụdị Delta na ụdị ndị ọzọ na -apụta;
Ma n'ezie, anyị chọrọ ọgwụ mgbochi ọzọ.
N’ọnwa gara aga, anyị kwupụtara na anyị na -edobe ebe nnyefe teknụzụ maka ọgwụ mgbochi mRNA na South Africa, dịka akụkụ nke mbọ anyị na -agbatịpụta mmepụta ọgwụ mgbochi.
Taa, anyị ewerela nzọ ụkwụ n'ihu, yana akwụkwọ ozi ebumnobi nke na -akọwapụta usoro njikọ aka nke ndị mmekọ nọ na oghere: WHO; ọdọ mmiri patent ọgwụ; Afrigen Biologics; Institute of Biologicals and Vaccines Institute of Southern Africa; Kọmitii Nnyocha Ahụike South Africa na Ụlọ Ọrụ Njikwa na Mgbochi Ọrịa Africa.
Ebumnuche nke WHO ka ga -akwado mba ọ bụla ịgba ọgwụ mgbochi opekata mpe 10% nke ndị bi na ngwụcha Septemba, opekata mpe 40% na njedebe nke afọ a, yana 70% n'etiti afọ na -abịa.
Anyị nọ ebe dị anya iji nweta ebumnuche ndị ahụ.
Ka ọ dị ugbu a, ihe fọrọ nke nta ka ọkara mba gbaa ọgwụ mgbochi ọrịa 10%nke ndị bi na ya, ihe na -erughị otu ụzọ n'ụzọ anọ nke mba gbara ọgwụ mgbochi 40%, naanị mba atọ gbara ọgwụ mgbochi 3%.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ gara aga, WHO malitere igosipụta nchegbu banyere ihe iyi egwu nke 'ịhụ mba n'anya';
Na nnọkọ mgbasa ozi n'ọnwa Nọvemba, anyị dọrọ aka na ntị maka ihe egwu dị na ndị ogbenye 'ga -azọda n' ebe nzọ ụkwụ maka ọgwụ mgbochi '';
Na nzukọ ndị isi oche WHO na Jenụwarị afọ a, anyị kwuru na ụwa nọ na njedebe nke “ndakpọ omume ọma”.
Ma nkesa nkesa ọgwụ mgbochi ọrịa zuru ụwa ọnụ ka na -aga n'ihu.
Mpaghara niile nọ n'ihe egwu, mana ọ nweghị ihe karịrị Africa.
N'ihe na -eme ugbu a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 70% nke mba Afrịka agaghị eru ebumnuche ịgba ọgwụ mgbochi 10% ka ọ na -erule ngwụsị Septemba.
A na -enye ihe dị ka nde 3.5 ruo nde 4 kwa izu na kọntinent ahụ, mana iji mezuo ebumnuche Septemba nke a ga -agbarịrị nde 21 na opekata mpe kwa izu.
Ọtụtụ mba Afrịka akwadebela nke ọma iwepụta ọgwụ mgbochi, mana ọgwụ mgbochi abịabeghị.
Ihe na -erughị 2% nke ọgwụ niile a na -eme n'ụwa niile bụ n'Afrịka. Naanị 1.5% nke ndị bi na kọntinent a na -agba ọgwụ mgbochi ọ bụla.
Nke a bụ nnukwu nsogbu ma ọ bụrụ na anyị ga -eme ihe megide ọrịa a wee kwụsị ya.
Ntinye ego a bụ obere akụkụ nke ego gọọmentị na-emefu iji lụso COVID-19.
Ajụjụ a abụghị ma ụwa nwere ike imeli itinye ego ndị a; ọ bụ ma ọ nweghị ike imeli.
Passerelle ekwu, sị:
September 26, 2021 na 22: 40
Mustajaba Hassan ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 3, 2021 na 09:22
Ezigbo Sir / Madam
Jntour na ederede njem iji jụọ ụlọ ọrụ gị ajụjụ
ga -enwe mmasị ime
zụọ ahịa gị. Jntour & Travel Ltd bụ ụlọ ọrụ dabere na Zanzibar, Tanzania
mee atụmatụ ngwugwu ụlọ ka ọ dabara onye ahịa anyị
mkpa. Ọ ga -amasị anyị ka gị na gị rụọ ọrụ dịka onye nnọchi anya.
Ọ bụrụ na enwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ mkpa ịkọrọ gị, egbula oge
zitere anyị email [email protected]
maka nkọwa ndị ọzọ. Ma ọ bụ jiri obiọma gaa na webụsaịtị anyị
Ekwentị: + 255757210649
Onye isi ụlọ ọrụ Jntour Company Ltd.